Beet iche | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Beet iche
Ghọta ihe kachasị mma iche iche
Beetroot bụ omenala dị iche iche. Enwere otutu ihe ntanye nke omenala a, ha nile di iche n'ile ha anya, uto, na ebe ha di. A na-akpọ ndị beet, nke anyị ji eji nri borscht, ebe iri nri. Nri bred bụ akụkụ dị mkpa nke nri anụ ụlọ.
Nkọwa na ịkọ nke Pablo beets
Enwere ike ịhụ ihe ọkpụkụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpokoro ọ bụla na mba ahụ. A na-agbakwunye ya na efere mbụ na nke abụọ, salads, n'ihi na ihe ọkụkụ a dị oke mma ma nwee uto dị mma. Taa, ụdị Pablo F1 dị iche iche nke okpokoro biiti na-aghọwanye ndị na-ewu ewu maka ịmalite na ya. Banyere ya ma a ga-atụle ya n'ihu.
N'etiti ihe nile di iche iche di iche iche, fodder na-ewe ebe ruru eru. Ọ bụ nri dị oké mkpa n'oge oyi maka anu ulo. A na-enwe obi ụtọ site na ehi, ehi, rabbit, ịnyịnya. Osisi ahụ bara ọgaranya na fiber, pectin, eriri nri, carbohydrates, saline mineral na protein. Beets budata na-eme ka mkpụrụ mmiri ara ehi pụta n'oge oge nri ụmụ anụmanụ na ndepụta ọkụ.
Kedu esi eme ihe ubi mmiri ara ehi maka oyi: ihicha, salting, kefriza
Ịnakọta jelii eze, esi enweta ngwaahịa ahụ na apiary
Otu esi akụ na-eto eto katran na ala